"(Hoy Jesosy :) Mankanesa aty; amiko, ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana." Matio 11:28
"Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko." Apokalypsy 3:20
Raha sanatria manosika anao hanapitra ny andronao ny famoizam-po, dia manatòna an’i Jesosy, lazao Azy ny fahorianao. Aza isalasalana ny hoe mihaino anao Izy, tia anao, te hanafaka anao. Hainy ny manavao tanteraka ny fihevitrao sy manome fitsaharana anao.
Toy ny olombelona rehetra, ianao dia manana hetaheta mafy tsy misy mahatony, afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Raha mbola tsy voavaly izany filana izany, dia misy banga ao aminao.
Te ho eo anilanao Jesosy, mba hampahafantatra anao ny Filazantsara, mba hampahalala anao fa tonga tety; an-tany Izy, hanome izay ilainao ara-panahy. Ny Filazantsara no mampahafantatra ahy fa sarobidy aho eo imason’Andriamanitra. Tiana amin’izao toetrako izao aho, mihoatra noho izay mety ho takatry ny saiko. Afaka ny ho voavela aho ny amin’ny heloko taloha, na inona na inona, ny amin’izay rehetra mety hiampangan’ny fieritreretako ahy. Ny fahafatesan’i Jesosy ho ahy no avotra ho amin’izany. Ny fanantenako sy ny dikan’ny fiainako dia ao amin’i Jesosy, Izay nanokatra ho ahy tontolo feno fiadanana sy fahamarinana ary fifaliana. Ny mba hampidirany ahy ao anatin’izany sehatra izany no nitondran’i Jesosy teo amin’ny tenany ny fahotako. Te ho eo anilako Izy amin’ireo andro manjombona; taominy aho tsy hikiry hiady, fa hiantoraka aminy. Eo mandrakariva Izy hihaino ny antsoantsoko, hamafa ny ranomasoko, hamaly ny sentoko.
Manatòna Azy! Aza manary toky. Manatòna amin’izao maha ianao anao izao, amin’izao toetranao izao. Tsy lavin’i Jesosy na oviana na oviana izay mandondòna eo am-baravarany, mba hovonjena sy hotiavina.